ဂျီပာတ်သဘော နားလည်မှုလွဲမှားခံနေရကြောင်းနှင့် အစ္စလာမ့်ဂျီပာတ်သဘောအမှန် ဗုဒ္ဓဘာသာ တွင်လည်းရှိပာု မြ၀တီမင်းကြီးဆရာတော် မိန့်ကြား … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဂျီပာတ်သဘော နားလည်မှုလွဲမှားခံနေရကြောင်းနှင့် အစ္စလာမ့်ဂျီပာတ်သဘောအမှန် ဗုဒ္ဓဘာသာ တွင်လည်းရှိပာု မြ၀တီမင်းကြီးဆရာတော် မိန့်ကြား …
7 other friends shared Myanmar Muslim Net‘s photo.
ဂျီပာတ်သဘော နားလည်မှုလွဲမှားခံနေရကြောင်းနှင့် အစ္စလာမ့်ဂျီပာတ်သဘောအမှန် ဗုဒ္ဓဘာသာ တွင်လည်းရှိပာု မြ၀တီမင်းကြီးဆရာတော် မိန့်ကြားမန္တလေး၊ မတ် ၁၉
ဂျီဟတ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို အလွဲလွဲအမှားမှား အသုံးပြုနေကြတယ်။ အခုဂျီဟတ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို အလွဲလွဲအမှားမှားနားလည်နေတယ်။ ဘုန်းကြီးတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘက်ကလည်း အလွဲအမှား နားလည်တယ်။ ဒီဂျီဟတ်ဆိုတဲ့ အသံကြားရင်ကို သိပ်အန္တရာယ်များတယ်လို့ မြင်လာတယ်။ ဘုန်းကြီးတို့မှမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကလည်း မြင်လာတယ်။ ဘုန်းကြီးတို့မှ မဟုတ်ပါ ဘူး။ ကမ္ဘာကလည်း ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှင်းပြဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟု ဦးအရိယ၀ံသ ၀ဋံသကာ(မြ၀တီဆရာတော်ဘုရားကြီး) က မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးအခမ်းအနားတွင် မိန့်ကြားသည်။
မန္တလေးမြို့ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့မှ နှိုးဆော်ကျင်းပသည့် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ Oriental House (Hotel ဖြစ် မယ်ထင်တယ်) တွင်ကျင်းပရာ အခမ်းအနားကိုသာသနာ ၅ ရပ်မှ ကိုယ်စားပြုဆရာတော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ရပ်နီးရပ်ဝေး မှ စိတ်ပါဝင်စားသူများဖြင့်စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသည်။
ဂျေဟတ်သဘောမှာ တကယ်ပြောတာက ဒီတိုက်ခိုက်ရမှာရှိတယ်။ ဘယ်မှာတုန်းဆိုလို့ရှိရင် တကယ်က ကိုယ့် အတွင်းက မကောင်းတဲ့ လောဘ၊ မောဟ၊ ဒေါသတွေကို တိုက်ခိုက်ရမှာ ကိုယ့် အတွင်းက မကောင်းတာတွေ မွေးမြူထားပြီး တစ်ဖက်လူတွေကို ဒုက္ခရောက်အောင်တိုက်ခိုက်ပစ်တာဟာ ဘာသာကို ဖျက်ဆီးပစ်တာ။ အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက် အန္တရာယ်ကြီး တယ်ဟု မြ၀တီဆရာတော်က အထက်ပါ အခမ်းအနားတွင် ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။
ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘုန်းကြီးတို့မှာလည်း ဂျီဟတ်သဘောတွေရှိပြီးသား။ ရဟန်းတစ်ပါး ရဟန်းခံတော့မယ်ဆိုရင်၊ ကိုရင်တစ်ပါး ရဟန်းခံတော့မယ်ဆိုရင် ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ နတ်ပြည် က – အေး မာရ်နတ်ကို ဖိုက်မယ့် စစ်သည်တော်တစ်ယောက်တိုးပြီလို့ ဒီလိုပြောတာ ဟု ဆရာတော်က ဗုဒ္ဓဘာသာအတွင်းမှ ဂျီဟတ် သဘောကို မိန့်ကြားသည်။
ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး အခမ်းအနားတွင် တောင်ဘီးလင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ မဟာမြိုင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၊ ရွှေကိန္ဒရီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကလည်း ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည် ညီညွတ်ရေး အတွက် တိုက်တွန်း အားပေးသည့် သြ၀ါဒများကို မိန့်ကြားသည်။
ပြောမယ်ကြံရင် မပြောခင်၊ လုပ်မယ်ကြံရင် မလုပ်ခင်၊ တွေးမယ်ကြံရင် မတွေးခင်၊ သူ့ထိခိုက်သလား၊ ကိုယ့်ထိခိုက်သလား။ နှစ်ဦးသားထိခိုက်သလား. .ဘယ်သူ့မှ မထိခိုက်ဘူးဆိုရင် အဲဒီမှာပြော၊ အဲဒါလုပ်၊ အဲဒီအတွေးဟာ အမှန်ပဲ။ ထိခိုက်တယ်၊ ကိုယ်ဆင်းရဲမယ်၊ စိတ်ဆင်းရဲမယ် ထိခိုက်တယ်နစ်နာတယ်ဆိုရင် အဲဒီ အလုပ်ဟာ အမှားပဲလို့သာ ဆုံးဖြတ် ဟုမဟာမြိုင်ဆရာတော် ဘုရားကြီးက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုသည့် သြ၀ါဒတော်မြွက်ကြားသည်။ အခမ်းအနားတွင် ခရစ်ယာန်သာသနာတော်မှ ဆရာတော်ဦးကျော်ရွှေ ဗဟာအီ သာသနာတော် မှ ဆရာတော် ဦးမြင်ဆွေတို့ကလည်း အကောင်းမြင်ဝါဒကျင့်သုံးရေး၊ ချစ်ခြင်းတရားပွားများနိုင်ရေး နိုးဆော်သည့် ဘာသာရေး တိုက်တွန်းချက်များ ကို ဟောပြော တင်ပြကြသည်။
“အကြီးကျယ်ဆုံး အမြင့်မြတ်ဆုံး ဂျေဟာဒ့်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဆိုး ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းမှုစိတ်ကို တိုက်ဖျက်ကာ အကြီးကျယ်ဆုံး ဂျေဟာဒ့်ပါပဲ” ဟု အစ္စလာမ့်သရုပ်မှန် ဂျေဟာဒ့် အကြောင်းကို ဗုခါရီကျမ်းလာ တမန်တော်မြတ်သြ၀ါဒတော် တစ်ရပ်ကို ကိုးကား ခလီဖာ ဦးသိန်းဝင်းအောင်က တင်ပြသည်။
“ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမက ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဲဒီ အဆုံးအမကို မလိုက်နာသူလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ၀ါဒနဲ့၊ ၀ါဒီ ၊တရားကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်ဆို လူရယ် တရားကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်ဆိုတဲ့ လူအချို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ခွဲမြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။”ဟု ခလီဖွာ ဆရာဦးအေးလွင်က ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။ ထို့အပြင် မကောင်းတဲ့လူအချို့ လုပ်ရပ်ကို ကြည့်ကာ အများစုအားလုံးကို အထင်အမြင်လွဲမှားမှုဖြစ်စေအပ်ကြောင်း အစ္စလာမ်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်သည်ပင် ငြိမ်းချမ်းရေးဟု အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်း ဆရာဦးအေးလွင် ကပင် ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
အစ္စလာမ်ကပြောတယ် ဂျေဟာဒ့်ဆိုတာ Freedom of worship လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းပါ။ (ကုရ်အာန်ထဲမှာ) ဘယ်လိုပြောတာ သလဲဆိုရင် စ၀ါမိအ်လို့ခေါ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းကန်တွေ၊ ဟိန္ဒူကျောင်းကန်တွေ၊ ဗိယအွန်လို့ခေါ်တဲ့၊ ခရစ်ယာန် ချာခ်ျတွေ၊ ဆွလ၀ါသ် လို့ခေါ်တဲ့ ဂျူးဘုရားကျောင်းတွေ မစာဂျိဒ် လို့ခေါ်တဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွေ ကို သူယုတ်မာတွေက လာဖျက်ဆီးရန် မင်းတို့မွတ်စလင်မ်တွေက အဲဒီဒေသမှာ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား၊ သြဇာရှိသူတန်းစား ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေကို အားလုံး ကို ကာကွယ်ပေးရမယ်။ ဒါဂျိဟာဒ့်ပါ။ Freedom of worship ကာကွယ်ပေးရမယ်တဲ့။ ဒါဂျီဟာ့ဒ်ပါ။ Anti Terrorism ပါ။ ဟု အစ္စလာမ့်ဓမ္မ ကထိကနှင့်ဓမ္မသတ်မှူး ဒေါက်တာမြင့်သ်ိန်း(မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကွန်ရက်)က ပြောသည်။
အစ္စလာမ်အပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားခံရဆုံးသော ဂျေဟာ့ဒ်ဆိုသည့် စကားရပ်ကို ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် အခန်း ၂၂၊ ဗျာဒိတ်တော် ၄၀ လာ အဓိပ္ပာယ်ကို အထက်ပါအတိုင်း ကိုးကား ကာ ဒေါက်တာမြင့်သိန်း(မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကွန်ရက်)က ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့၏ နိုင်ငံအပေါ် အကျိုးပြုပုံများ၊ အစ္စလာမ့်အိမ်ထောင်မှုအနှစ်သာရများ အကြောင်း နှင့် သားဖောက် သာသနာပြုမှုနှင့် အစ္စလာမ် လုံးဝမပတ်သက်ကြောင်း စသည့်အချက်များကိုလည်း ဒေါက်တာမြင့်သိန်း(မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကွန်ရက်)ကပင် ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တွေက တရုတ်ပြည်ကို ဘုံမယားအဖြစ် ရောင်းစားခံနေရတယ်။ လိင်အပျော် (အဖြစ်) ယိုးဒယားကို ရောင်းစားခံနေရတယ်။ နောက်ဆုံး ပြည်တွင်းမှာ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း၊ ဘာသာတူ အချင်းချင်း က ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းအတွက် ကုန်ကူးနေတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။ သူတို့အတွက် အလုပ်အကိုင်တွေ ဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံတကာက ကြွေးမြီတွေ ကျွန်တော်တို့ကျော်ဖို့ လိုတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ဘာသာတွေကြားထဲမှာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေရင် ဘယ်သူက လာပြီး Invest လုပ်မှာလဲ ဟု ဒေါက်တာမြင့်သိန်း(မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကွန်ရက်)က ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
အစ္စလာမ်တွင် လူများစရာမလိုကြောင်း သစ္စတရားဟူသည် အင်အားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း အစ္စလာမ်ကို အမှန်တကယ် မယုံကြည်ဘဲ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ၀င်ရောက်လာသူကို အယောင်ဆောင်ဟု ခေါ်ကြောင်း ငရဲတွင်ပင် အောက်ဆုံး၌ နေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ စာအုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၉၇ ခုနှစ်က နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကနှင့် သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနသို့ ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုပြန့်နှံ့နေသော အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး အခွေများ လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိတို့ဖြေရှင်းရန် အသင့်ရှိကြောင်း၊ ယခုတက်ရောက်လာသည့် သံဃာတော်များကို တိုင်တည်၍ ပြောလိုကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မွတ်စလင်မ် Dialogue လိုအပ်နေကြောင်းလည်း ဘာသာတူ လင်မယားအချင်းချင်းမှာပင် ဇနီးကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများရှိနေရာ ဘာသာမတူဘဲ ယူထားသူများ အကြား ညှဉ်းပန်းမှုရှိက ပုဂ္ဂလိက ပြဿနာသာဖြစ်ကြောင်း၊ အစ္စလာမ်နှင့် မပတ်သက်ကြောင်း ၊ အစ္စလာမ့် ဓမ္မသတ်မှု့း နှငိ့် ဓမ္မကထိက ဒေါက်တာမြင့်သိန်း(မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကွန်ရက်) ကဆက် လက်ပြောကြား သွားသည်။
ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုး ကျင်းပခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားတာ ၄-ကြိမ်ရှိပြီ ၃-ကြိမ်က ခွင့်ပြုချက်မရခဲ့ဘူး။ တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ဆောက်ချင် တယ်။ မြန်မာ့ လူ့ဘောင် အသိုင်းအ၀ိုင်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှ သာယာမှ နေတဲ့လူအားလုံး စိတ်ချမ်းသာမယ်။ ပာု ကိုအောင်ဇော်ဝင်း (စွမ်းအားလျှပ်စစ်)က myanmarmuslim.net သို့ပြောသည်။
ဟု အထက်ပါအခမ်းအနားကို စီစဉ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်ဇော်ဝင်း (စွမ်းအားလျှပ်စစ်)က myanmarmuslim.net သို့ ပြောသည်။
သက်ကြီးဝါကြီး သံဃာတွေကတော့ အချိန်ကြာတော့ ပင်ပန်းတာလည်း ပါတယ်။ ပြီးတော့ နဂိုကတည်းက သူတို့မှာ သံသယလည်းမရှိတော့ သံသယကင်းဖို့ သူတို့ကြည့်စရာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ သဘောလည်း ပါပါတယ်။ သူ(ဦးဝီရသူ)ကသာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဗလီကြည့်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က လိုက်ပြဖို့အသင့်ပါပဲဟု လည်း ဦးအောင်ဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ဘာသာရေးဝတ်ပြုဆောင်ဖြစ်သည့် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များအတွင်း မြေအောက်ခန်းများရှိသည်ဟု မဟုတ်မမှန် အထောက်အထားမဲ့ ရေးသားခဲ့သည့် ဦးဝီရသူသည် အခမ်းအနား အပြီးတွင် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များအား လိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ထို့အပြင် ဦးဝီရသူသည် ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးပွဲအတွင်း ပွဲစီစဉ်သူများ အား ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းကိုယ်တိုင်ရေးသားသည့် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖြစ်စေနိုင်သည့် စာအုပ်ငယ်ကိုလည်း ဝေငှခဲ့သည်။ထိုအပြင် ၉၆၉ အဖွဲ့များက အခမ်းအနားရှေ့တွင်လာရောက်ကာ ၉၆၉ လှုံ့ဆော်စာများ ဝေဌခဲ့သည်။
This entry was posted on March 21, 2013, in ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မင်းပြားတွင် ရိုဟင်ဂျာ (၃) ဦး အသတ်ခံရ	မိတ္ထီလာမြို့အကြမ်းဖက်မှုနောက်ဆက်တွဲသတင်းများ၊ ဗလီ(၅)လုံးနှင့်မင်္ဂလာဇေယျုံဟာဖိဇ်ကျောင်းမှာ မီးရှို့ခံရ … →